ယူရို ၂၀၂၀ မှာ အင်္ဂလန် အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး ၊ အဆိုးဆုံး နဲ့ အဖြစ်နိုင်ဆုံး အဆုံးသတ် ၃ ခု - SPORTS MYANMAR
ယူရို ၂၀၂၀ မှာ အင်္ဂလန် အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး ၊ အဆိုးဆုံး နဲ့ အဖြစ်နိုင်ဆုံး အဆုံးသတ် ၃ ခု
ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲကြီးကို ဒီကနေ့ညမှာ စတင် ကစား ကြတော့မှာပါ ။ နိုင်ငံပေါင်း ၂၄ နိုင်ငံ ပါ၀င် ယှဉ်ပြိုင် ကြမယ့် ဒီပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ပရိသတ်တွေ အရင်းနှီးဆုံး နဲ့ အားပေးမှု အများဆုံး အသင်းကတော့ အင်္ဂလန် အသင်းပဲ ဖြစ်လို့ နေမှာပါ ။ ပရီးမီးယားလိဂ် ကစားသမားတွေကို အခြေခံပြီး ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အင်္ဂလန်ဟာ ခရိုအေးရှား ၊ စကော့တလန် နဲ့ ချက် အသင်းတို့နဲ့ အတူ အုပ်စု D မှာ ပါ၀င် နေခဲ့ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် အသင်းဟာ သမိုင်းတစ်လျောက် ပရိသတ် အားပေးမှု အများဆုံးတွေထဲက တစ်သင်း ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ယူရို ပြိုင်ပွဲ မှာတော့ အောင်မြင်မှု မရရှိခဲ့ ဖူးပါဘူး ။ ဘောလုံး ဘိုးအေကြီး လို့ ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ အင်္ဂလန် ဟာ ယူရို ပြိုင်ပွဲ သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း ၆၀ ၊ အကြိမ်ပေါင်း ၁၄ ကြိမ် အတွင်း ဗိုလ်လုပွဲကိုတောင် မတက်ခဲ့ဖူးဘဲ ဆီမီး ဖိုင်နယ် အဆင့်အထိသာ အမြင့်ဆုံး ရောက်ခဲ့ဖူး ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့်လည်း အင်္ဂလန် ဟာ အမြဲတမ်းလိုလို ပြိုင်ပွဲရဲ့ ရေပန်း အစားဆုံး အသင်းအဖြစ် ရှိနေဆဲပါပဲ ။ ဒီနှစ် ပြိုင်ပွဲမှာလည်း အင်္ဂလန် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထင်မြင်ချက်တွေ အမျိုးမျိုး ပေးထားခဲ့ ကြပါတယ် ။ တစ်ချို့က ဗိုလ်စွဲမယ် ၊ တစ်ချို့က ဗိုလ်လုပွဲ ၊ တစ်ချို့ကတော့ စောစော အိမ်ပြန်ရမယ် . . . စတာတွေနဲ့ စုံစိလို့ နေပါတယ် ။
တကယ်တမ်းမှာတော့ အင်္ဂလန် အတွက် အကောင်းဆုံး ၊ အဆိုးဆုံး နဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေ အရှိဆုံး လမ်းကြောင်းက ၃ ခုပဲ ရှိပါတယ် ။ အဲ့ဒါတွေက ဘာတွေလဲ ဆိုတာ ကြည့်လိုက် ကြရအောင် . . .
၁ ။ အကောင်းဆုံး ဖြစ်နိုင်ချေ
ဒီဖြစ်နိုင်ချေက တကယ်ကို နည်းပါးပေမယ့် ယူရိုဟာ အံ့အားသင့်စရာတွေ ဖြစ်တတ်တာကို ထည့်တွက်ရပါမယ် ။ အင်္ဂလန် ဟာ မရဏ အုပ်စုလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အုပ်စု F က အသင်းနဲ့ ၁၆ သင်းဆင့်မှာ ရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ပြင်သစ် ၊ ပေါ်တူဂီ ၊ ဂျာမနီ တို့ မဟုတ်ဘဲ အားအနည်းဆုံး ဟန်ဂေရီ နဲ့ ကံကောင်းထောက်မစွာ တွေ့ဆုံ သွားနိုင်ချေလည်း ရှိနေပါတယ် ။
အကယ်၍ အင်္ဂလန်သာ ဟန်ဂေရီ နဲ့ ၁၆ သင်းဆင့်မှာ တွေ့ခဲ့မယ် ဆိုရင် အနိုင်ယူ ကျော်ဖြတ်ဖို့ အခက်ခဲ ရှိမှာ မဟုတ်ဘဲ ကွာတား မှာ ဆုံနိုင်တဲ့ စပိန် ကလည်း လက်ရှိမှာ အင်္ဂလန်ထက် နှာတစ်ဖျား နိမ့်လို့ နေပါတယ် ။ ဆီမီး ဖိုင်နယ် မှာလည်း နယ်သာလန် ( သို့ ) အီတလီ တစ်သင်းသင်းနဲ့ ဆုံနိုင်သလို အံ့သြစရာတွေသာ ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒိန်းမတ် ၊ တူရကီ ၊ ဆွစ်ဇာလန် ၊ ဝေးလ် တို့လို အသင်းတွေနဲ့ တောင် ဆုံချင်ဆုံနိုင်ပါတယ် ။
ဒီလိုသာ ဖြစ်လာခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ အင်္ဂလန် အတွက် သမိုင်းတစ်လျောက် ပထမဆုံး အကြိမ် ဗိုလ်လုပွဲ တက်ရေး အိပ်မက်ဟာ အကောင်အထည် ပေါ်လာနိုင်ဖို့ အလားအလာ ကောင်းနေပါတယ် ။ ဗိုလ်လုပွဲမှာတော့ ဘယ်လ်ဂျီယံ ၊ ပြင်သစ် တို့လို အသင်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင် ရနိုင်ပြီး အဲ့ဒိ အချိန်မှာ ဆိုရင်တော့ ဘာမဆို ဖြစ်လာနိုင်တယ် လို့ပဲ ပြောရတော့မှာပါ ။
၂ ။ အဆိုးဆုံး ဖြစ်နိုင်ချေ
အဆိုးဆုံး ကတော့ အုပ်စု မှာ ပထမရမယ် ၊ ၁၆ သင်းဆင့်မှာ ဟိုဘက် အုပ်စုက ဒုတိယရလာမယ့် ပြင်သစ် နဲ့ တွေ့မယ် ( အုပ်စု F တွင် ပြင်သစ် က အတောင့်တင်းဆုံး အဖြစ် သတ်မှတ် ထားကြပါတယ် ) ။ ရှုံးပြီး အိမ်ပြန် ရပါမယ် ။ ကွာတားတက် နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း အကြပ်ဆုံး ဖြစ်နိုင်ချေ အဖြစ် အုပ်စု A မှာ ကံဆိုးပြီး တတိယ ရသွားနိုင်တဲ့ အီတလီ နဲ့ ဆုံတွေ့ နိုင်ချေ ရှိနေပါတယ် ။
တကယ်လို့ အဲ့ဒိအဆင့်ကို ကျော်နိုင်ခဲ့ရင်တောင် ဆီမီးဖိုင်နယ် မှာ အုပ်စု F ကပဲ ဖြစ်တဲ့ ဂျာမနီ ၊ ပေါ်တူဂီ တစ်သင်းသင်း နဲ့ ဆုံနိုင်ချေ ရှိနေ ပါသေးတယ် ။ အုပ်စု F က ၃ သင်းစလုံးဟာ အင်္ဂလန်ကို အလဲထိုးနိုင်တဲ့ အင်အား ရှိတာကြောင့် သူတို့နဲ့ ကစားရမယ့် ပွဲတိုင်းဟာ အင်္ဂလန် ကို စောစော နားရဖို့ အလားအလာ ပိုကောင်းနေနိုင်ပါတယ် ။
အဲ့ဒါတွေ အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဗိုလ်လုပွဲ တက်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ အင်္ဂလန်ကို ချီးကျုးရမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလန် ဟာ အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်း ကျော်သလောက် မတော်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းက ရှိနေပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အဆိုးဆုံးလမ်းကြောင်း ထဲကို ၀င်သွားမယ် ဆိုရင်တော့ စောစောစီးစီး နားရဖို့က ဗိုလ်လုပွဲ ရောက်ဖို့ထက် ပိုပြီး ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိနေမှာပါ ။
၃ ။ အဖြစ်နိုင်ဆုံး
အင်္ဂလန်က ခရိုအေးရှား နဲ့ ကစားမယ့် အုပ်စု အဖွင့်ပွဲကို မနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဘယ်လို ဖြစ်လာနိုင်မလဲ ? တကယ်လို့ အုပ်စု ဒုတိယ ရခဲ့မယ်ဆိုရင် နယ်သာလန် တို့ရဲ့ အုပ်စု E က ဒုတိယ ရမယ့် အသင်းနဲ့ ကစားရမှာပါ ။ ဆွီဒင် ဖြစ်ဖို့ များပါတယ် ။ ဒါက အင်္ဂလန် ကို ကွာတားဖိုင်နယ် လက်မှတ် သေချာ စေမှာပါ ။
ကွာတားမှာ အုပ်စု F က ပထမရမယ့်အသင်း ( ပြင်သစ် ၊ ပေါ်တူဂီ ၊ ဂျာမနီ ) နဲ့ ကစားရပါမယ် ။ ဆီမီး တက်ခဲ့ရင်တော့ အီတလီ နဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံ တို့ထဲက တစ်သင်းသင်း ဖြစ်နေ မှာပါ ။ ဒါက အင်္ဂလန် အတွက် အဖြစ်နိုင်ဆုံးနည်းလမ်း အဖြစ် ရှိနေပါတယ် ။
ပရိသတ်ကြီးတို့ ရော အင်္ဂလန် အသင်း ဘယ် အဆင့် အထိ ရောက်အောင် သွားနိုင်မယ် ထင်သလဲဗျာ . . .